Sida loo Doorto Suugo Soy-ga ugu Fiican, Mise Waa Tamari? -Siy Saariga -NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Sida loo Xulo Suugo Soy ah oo Ugu Fiican, Mise Waa Tamari?
Waqtiga: 2018-01-23 Hits: 241
MAY 4, 2015 waxaa qoray SARA NOVAK
Kordhinta Waxaan laxiriiray maraqa soy leh shiilan shiidan iyo sushi. Waalidkey badanaa uma isticmaalin sababta oo ah waxay cusbada ku badnayd. Laakiin markii uu qof weyn yahay, suugada soy waxaa ku xirnaa umami, ama dhadhanka shanaad oo ay weheliso macaan, cusbo, qadhaadh, iyo dhanaan. Waa astaamo macaan oo aan jeclahay, taasina waxay ka dhalatay, inta badan waxay ka muuqataa cunnadayda. Maraqa soy, ama nooc kale oo ka mid ah sida tamari iyo nama shoyu, si joogto ah uga dheeho cuntada sida guriga loo isticmaalo. Laakiin waa maxay farqiga u dhexeeya iyaga oo ka caafimaad qaba mid kale? Aynu si dhow u eegno sheyga ugu caafimaad badan.
Maraqa soy iyo tamari labadaba waa alaabada soy la kariyey, laakiin tamari waxyar ayey u tahay ilaa sarreen. Haddii aad ku jirtid cunno aan ku jirin gluten-ka, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in badeecada ay gabi ahaanba ka madax-bannaan tahay gluten-ka, laakiin waxaa jira tiro ka mid ah badeecadaha suuqa ku jira. Tamari waa xoogaa isku dheelitiran oo cusbada ka yar maraqa soy. Dhadhantiisu waa ka sii murugsan tahay, qoto dheer, oo aad u macaan. Tamari run ahaantii waa qaabka Japan ee maraqa soy.
Hadana waxaa jira waxa loogu yeero "champagne of soy soces", nama shoyu. Markii ugu horreysey waxaan ka maqlay taas oo ku jirtay buug-cunto-karin (vegan cookbook) ah oo aan ka soo iibsaday dukaan-ku-iibsi buugag loo adeegsaday ee Hawaii. Waxay u muuqatay ku dhowaad cunto kasta oo ka bilaabda dharka saladhka illaa iyo maraqyada. Nama shoyu waa nooc heer sare ah oo maraqa soy. Caadi ahaan waa dabiici dabiici ah oo lagu sameeyay maadooyin tayo sare leh sida soybeans-ka dabiiciga ah iyo non-gmo, sarreenka, milixda badda, iyo biyaha guga. Waa cayriin oo aan bisil lahayn, oo in kasta oo lagu kululeeyo ka sarreysaa heerarka 114, cunno-cunno cayriin ayaa weli cunaysa maxaa yeelay waxay ka kooban tahay enzymes nool sida lactobacillus. Waxa kale oo ay ka yar tahay aashitada iyo cusbada ka yar maraqa soy ee caadiga ah. Laakiin sidoo kale waxay la timid calaamadaha qiimaha badan, inta badan 2-3 jeer qiimaha tamari ama maraqa soy. Laakiin dhab ahaan dhadhan fiican bay leedahay.
Midkee ayaa ugufiican? Hagaag, kiisaska oo dhan, waa inaad iibsataa mid dabiici ah maxaa yeelay walxaha ugu weyn waa soy, taas oo inta badan wax laga beddelo hidde ahaan. Oo loogu talagalay 'gluten-free', waxaan ahay taageere weyn oo tamari dabiici ah sababta oo ah kakanaanta dhadhankeeda. Waxaad ka heli kartaa mid aad u jaban inta badan dukaanka cuntada caafimaadka leh. Haddii aadan lahayn gulutaan-jilicsan oo aad rabto shey runtii labaad ah oo aan midna lahayn marka loo eego dhadhanka, isku day nama shoyu. Waxay ku timaadaa dhalo yar, waa qaali, laakiin sidoo kale waa dhalanteed!
Haddii aad rabto inaad ka saarto soy cuntadaada, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa qumbaha aminos. Waxay ka kooban tahay ceyriin, dheecaan geedo qumbaha, iyo cusbo qorraxda qalalan. Sidoo kale waa bilaa-aan lahayn gluten-ka waxayna ka kooban tahay xNUMX amino acids. Laakiin way adag tahay in laga helo dukaanka raashinka. Marka halkaas ayaad ku haysataa. Fursado badan oo wanaagsan ayaa iskudaynaya dhammaan cuntooyinka aad kahesho.
Hore: Saamaynta maraqa soy ee karinta
Xiga: Maraqa Soy ee la kariyay iyo Sauce Soy isku qasan